अनशनमै बिरामी जाँच्छन् डा.केसी – Health Post Nepal
अनशनमै बिरामी जाँच्छन् डा.केसी
२०७७ भदौ ३० गते १८:२६
सेतै फूलेको कपाल। उमेरले ६० कटिसकेकाले अनुहार पनि चाहुरिएको छ। त्यसैमाथि दुई दिनदेखिको भोको पेट। तैपनि उनी आफ्नो धर्ममा अडिग छन्। सेवा सुविधा भने जति नपाउँदा आफ्नो कामै नगरी आन्दोलनमा बस्नेहरू धेरै देखेका छौं।
तर, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको माग राख्दै दुईदिनदेखि जुम्लामा अनशन बसेका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले भोको पेट हुँदा पनि आफ्नो चिकित्सकीय धर्म छाडेका छैनन्। डा. केसीबारे समाचारमा मात्र सुनेका जुम्ली नागरिक अहिले अनशन गर्न आफ्नै ठाउँमा पुगेपछि गुणस्तरीय उपचार पाउने अपेक्षाका साथ अनशनस्थलमै पुगेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापनको माग गर्दै सोमबारदेखि डा. केसी जुम्लामा अनशन बसेका छन्। उनलाई त्यहाँ भेट्न अनेकौं व्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। भेट्न आउनेमध्ये अधिकांश बिरामी छन्। कोही आफ्नै समस्या लिएर आउँछन् त कोही बालबच्चा बोकेर डा.केसीलाई देखाउन थाल्छन्।
कमजोर शरीर भए पनि आत्मबल उच्च भएका डा. केसीले आफू भोको छु भन्ने पनि प्रवाह नगरी समस्या लिएर आउने बिरामीको हेरचाह गर्न छाडेका छैनन्। अनशनस्थलमै उनले उपचार सेवा दिइरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै अनशन बसेका डा. केसी माग पुरा नभएसम्म बरु मर्ने तर अनशन नतोड्ने अडानमा छन्। अनशन बसे पनि आफ्नो चिकित्सकीय धर्मले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई नाइँनास्ती गर्न नमिल्ने भएका कारण अन्तिम सास रहुन्जेल बिरामीको सेवा गर्न नछोड्ने उनी बताउँछन्।
मन्दिरमै अनशन बसेको जानकारी पाएपछि स्थानीय गरिब तथा विपन्न नागरिक निःशुल्क उपचार हुने आशाले मन्दिरमै पुग्न थालेका छन्। आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी मन्दिरमा अनशनरत डा. केसीले आफू भोकै बसेर पनि नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे देखाएको चासोप्रति स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन् ।
उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल पदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्टानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशाेधन गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर डा. केसीले अनशन सुरु गरेका हुन्। यसअघि उनले १६ औँ सत्याग्रह पनि जुम्लामै गरेका थिए।
पहिलाको सत्याग्रहका बेला गरिएका सम्झौताहरू अहिलेसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफू अनसन बस्न बाध्य भएको डा. केसीले बताए। अनशनबाट आफ्नो माग पुरा भए दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँज बृद्धि हुने उनले दाबी गरेका छन्।